U-Nastasya Samburskaya emva kwe-Kurban Omarova uzame ukumdekisa uMikhail Galustyan
Kwiiveki ezidlulileyo uNastasya Samburskaya waba ngu-heroine wangempela emva kweengqungquthela. Uhambo olutshanje lomdlali weSpeyin, apho adibana khona nomyeni ka-Xenia Borodina, uKurban Omarov, wenyusa inethiwekhi yentlalo. Abafaki be-"House-2" ekhokelayo, bekrokreza inkwenkwezi ye "Univer" kwiveli kunye nomntu otshatileyo, ugxeke udumo malunga nomcimbi kunye no-Kurban.
Nangona kunjalo, uNastasya Samburskaya akayena ntombazana oya kuhlala ethule xa ephendulwa nayiphi na ibango. U-Nastasya wakhulula amanqaku amaninzi malunga no-Xenia Borodina, ekhuza "umlingani" ukuba ubhekene nobunzima be-teleproject, ebeletha abantwana abavela kumadoda ahlukeneyo kunye nokuthengisa izinto eziphantsi kweemveliso nge microblogging yakhe. Ekuphenduleni, uBorin uthi ininzi "iinkwenkwezi" zizama ukwenza ipropiaritsya ekuboniseni udumo lwethelevishini.
UNastasya Samburskaya utshele inyaniso malunga nobudlelwane noMikhail Galustyan
Ngobusuku uNastasya Samburskaya "wathinjwa" kwindoda enentsapho ehloniphekileyo. Ngaphantsi kwezinto ezibonakalayo kumdlali we-actress kwakunguMichael Galustyan.
Kwiphepha lakhe le-Instagram, u-Nastasya Samburskaya uxelele ukuba wayelungiselela le projekthi entsha kunye neenkwenkwezi ze-KVN, kwaye wayeceba ukufumana indima kwimiboniso ezayo ngebhedi. Iindaba ezidlulileyo ze-Samburskaya ziboniswe ngesithombe esifanele kunye nomnye osebenza naye.
Nangona kunjalo, uGalustyan akazange ahlukane nesipelo somdlali wehlazo, othanda amahlaya kunye namahlaya:
Silungiselela iphrojekthi entsha. Ndandifuna ukuhamba ngendlala, kodwa le Armenian yayifuna imali
Intombi uTimati noAlena Shishkova bafumana njengesipho esivela kuPapa SUV
U-Lolita onoyolo ubonise ibhola ngekhondom kubabhalisile, ividiyo
U-Anna Mathison noSergei Bezrukov baba ngabazali, isithombe sokuqala
UNadezhda Babkina wahlazisa uAnastasia Volochkova kulo lonke ilizwe
U-Britney Spears waphula elinye iqabane
U-Xenia Borodina wahamba kwi-Instagram nodonga lwamahlazo
Ubuchwephesha bokwandisa iinwele
I-Arabia okanye yaseMpumalanga
Iingcebiso zoogqirha indlela yokuphila ubomi obude kunye nobomi
Izitya eziphezulu ezili-10 zomhla wokuthandana
Iimpawu ezithandekayo zomntwana
Imisebenzi yaloo ntombazana omncinci ngaphambi kokukhupha esibhedlele
Iinaliti zePine: izakhiwo ezixhamlayo
U-Agnia Ditkovskite no-Alexei Chadov baqhekeza?
Udidi luka-Jolie no-Pitt
Izityalo ezingaphakathi kwe-columbine
Umculi odumile uDima Bilan
Ootata abakhulu phakathi kwabashishini beRashiya abacebile kakhulu
U-Olga Buzova wadibana kwikhonsathi yakhe eSt. Petersburg Palace Palace, ividiyo
Ukubilisa ingqolowa kwi-cob
Jam kusuka ku-persimmon
Yintoni enokuyenza umphathi wezotyelelo olungileyo?
Iimpawu ezifanelekileyo kwiintlanzi hake